iikhrayitheriya zokwamkelwa ngokuchasene neemvavanyo zokwamkela
Eyona Agile Inkqubo yokwamkelwa ngokuchasene novavanyo lokwamkelwa
Uyintoni umahluko phakathi kweekhrayitheriya zokwamkelwa kunye novavanyo lokwamkelwa? Imibutho emininzi elandela indlela ye-agile, ngakumbi kwi-Behaeve Driven Development (BDD) isebenzisa la magama mabini ngokungafaniyo.
Xa bexoxa ngeenkcukacha zebali abantu bathanda ukutsiba ngokukhawuleza ekubhaleni 'Uvavanyo' ngolwimi lwe-gherkin ukuveza iinjongo zabo ngokubhekisele kuXesha-nini-ke iimeko xa kufanelekile ukuba bajolise kwiseti yeemeko ezilawula indlela yokuziphatha kwebali . Ngapha koko, uMike Cohn ubhekisa kwezi ndlela zokwamkela 'njengeMiqathango yoKwaneliseka'.
Kukho umahluko ocekeceke phakathi kweendlela zokwamkelwa kunye novavanyo lokwamkelwa. Inkqubo yokwamkelwa siseti yeemeko ekufuneka zifezekisiwe ukuze lamkele ibali liphelele.
Uvavanyo lokumkela, kwelinye icala, ziimeko ezivela kwimilinganiselo yokwamkelwa. Ngamanye amagama, indlela nganye yokwamkelwa inokuba novavanyo olunye okanye nangaphezulu. Uvavanyo lokwamkela lunokubhalwa ngolwimi lwe-gherkin olunokusetyenziswa zizixhobo ze-BDD ezinje ngekhukhamba ukwenza iimvavanyo ukuba zisebenze.
Iikhrayitheriya zokwamkelwa zinokucingwa nje ngokuba 'yintoni ekufuneka yenziwe' kunye novavanyo lokwamkelwa njenge 'indlela ekufuneka yenziwe ngayo'. Ungasebenzisa iikhrayitheriya zokwamkelwa ukucacisa ubungakanani bebali ngalinye, ukuze iqela licace gca kulindeleke ukuba kwenziwe ukuhambisa ibali.
Ngesi sizathu, kungcono ungabhali iikhrayitheriya zokwamkelwa njenge-gherkin yokucacisa kunye nokwahlula 'yintoni' ukusuka 'njani'. Iikhrayitheriya zokwamkelwa zinokubhalwa njengamanqaku eebhulethi ukuqaqambisa injongo yebali apho inqaku ngalinye lembumbulu liyimeko.
Kungenxa yeencoko nabachaphazelekayo, abaphuhlisi kunye ne-QA apho iinkcukacha zendlela nganye yokwamkelwa ziphelisiwe, o.k.t. kwiindibano zocweyo zamabali okanye kwiiseshoni zokulungisa amabali apho amalungu ahlukeneyo eqela anezakhono ezahlukeneyo nolwazi kunye namava ahlala kunye kwaye acinge ngemeko zokufezekisa inkqubo nganye.
Inkqubo yokwamkelwa ihlala iqalwa nguMnini weMveliso okanye i-BA kodwa amanye amalungu eqela angathatha inxaxheba ekuchazeni iikhrayitheriya zokwamkelwa zebali ngalinye. Ngokucacileyo ezi kufuneka zibhalwe kwaye kuvunyelwane ngazo phambi kokuqala komsebenzi wophuhliso. Iimvavanyo zokwamkelwa kwifomathi ye-gherkin okanye kungenjalo zinokubhalwa ngaphambi okanye ngokuhambelana nophuhliso. Iimvavanyo ezintsha zokwamkela zinokongezwa nangaliphi na ixesha.
Ubhala nini iimvavanyo zebali
Inkqubo yokwamkelwa ngokuchasene nemeko
Inqaku elililo 10 umkhuseli wescreen
lg g7 umhla wokukhutshwa usa
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 vs Galaxy Qaphela 20 Ultra: I-classic vs cosmic
Eyona meko ye-Samsung Galaxy S20 FE
Eyona Apple Apple 6s yeebhetri ezandisiweyo
Uyisebenzisa kanjani i-SQL Yenza iNkcazo yokuDala indawo yogcino lwedatha kunye neetafile
Ukugcinwa simahla kweefoto zikaGoogle kusimahla namhlanje
Uyenza njani ifowuni yakho ye-Android ikukhumbuze emva komnxeba ophosiweyo okanye isicatshulwa
I-iPhone SE (2020) yokutshaja ngokukhawuleza kuvavanywa: 5W vs 18W isantya sokutshaja
UGoogle unika ukhetho oluninzi lokuthintela umnxeba kwi-app ongayikrokrela
ICostco ikugcinela imali ekuthengeni ikhowudi ye- $ 100 yeGoogle Play kunye nekhadi lesipho le- $ 50